sedan Japanese "Mitsubishi-Lancer" -9 wethulwa emphakathini aseYurophu ngaleso eMoscow Motor Show ka-2003. Kusukela ngesikhathi kwamenyezelwa ekukhiqizweni izinto ezintsha. Ngemva kweminyaka engu-2 Sedan Japanese kancane olusha, inguqulo ethulwa restyling izimoto "Mitsubishi-Lancer". abanikazi Izibuyekezo zithi le nguqulo usuthandwa emakethe yasekhaya futhi yazuza sisikhulu eRussia. Eqinisweni, isizukulwane 9th "Lancer" ziyaphawuleka kuyi CIS emakethe, njengoba iningi kulo mshini senziwa kubashayeli Russian. Kusukela ngo-2007, Sedan wayeka ukuvumela (endaweni yakhe "Mitsubishi-Lancer" isizukulwane 10 weza), kodwa ukubona kwale nganekwane manje kungenzeka cishe kuwo wonke emgwaqweni kwanoma iyiphi idolobha. Lokhu akusona isimanga, ngoba "Lancer" enjalo libhekene high quality Yakha, intengo yeningi, maneuverability kakhulu futhi design ekhangayo. Futhi manje kabanzi ngalokhu.
"Mitsubishi-Lancer": Izibuyekezo wabanikazi ukubukeka
Imoto lithole ukubukeka ngempela stylish futhi iyaguquka. eseyintsha Front has izibani ezintsha ntathu Umumo semikhawulweni oyindilinga, isikhungo flaunts entsha zamanga kurediyetha Izinsimbi aluminium anezikhala. I-bumper luvumelana ebanzi air eyanele, lapho ezinhlangothini ukukhanya "isibhamu" izibani inkungu. Ngemuva, kakhulu, zonke zingekho izingxenye extra - yesimanje ukuqalisa isivalo, amabhampa futhi yokukhanya obunobunye. Eliphezulu ukubukeka futhi bejabule - ngakho elichaza Umklamo "Mitsubishi-Lancer" Izibuyekezo nabanikazi. Ngokuvamile, amaJapane kwasebenza kahle futhi wadala a look zanamuhla ngempela ukuthi namanje awubonakali wawushiywe yisikhathi.
Ingaphakathi Sedan "Mitsubishi-Lancer"
Izibuyekezo wabanikazi uthi akuyona kuphela ezicini ezinhle kodwa futhi ongathandeki gumbi. Omunye abampofu umsindo ukwahlukanisa. Phakathi idrayivu akuyona emgwaqeni egandayiwe ukuzwa ngokucacile zonke beat itshana kancane, zishaya phansi imoto. injini Ukuduma komsindo, futhi, akuyona abanikazi ujabule kakhulu. Nokho, akubona bonke ngakho sad, njengoba Uma unganakile, lesishiyagalolunye-isizukulwane "Mitsubishi-Lancer". Izibuyekezo uthi abanikazi ingaphakathi ezinkulu futhi ivulekile, emgqeni ongemuva ezingasetshenziswa kahle ihlanganise abadala abathathu. Futhi isici esihle esimweni esingajabulisi khona ezahlukene isitoreji amabhokisi yonke imininingwane. On the front panel - egumbini igilavu, umnyango - emaphaketheni plastic, phakathi izihlalo - kubhokisi evulekile, futhi ngisho console isikhungo abe niche encane okhiye noma izincwadi.
izici Kobuchwepheshe isizukulwane 9 "Mitsubishi-Lancer"
Izibuyekezo wabanikazi uqaphele ezihlukahlukene izinjini. Ziyakwazi empeleni abangaphezu kuka-10, kodwa yanikezwa emakethe ngamunye alikho inani eligcwele. Ngakho, i-baseRussia amaJapane enikeziwe ezintathu kuphela likaphethiloli amayunithi. Phakathi kwabo, uthunjana ngevolumu yakhe ukusebenza ine okukhiphayo 82 amahhashi. motor esijwayelekile 98 ifinyelele "ihhashi", futhi umthamo yayo zokusebenza Kwandiswa ezingeni 1.6 amalitha. Senior ezimbili-litre engine ine okukhipha 135 amahhashi. Kodwa zonke iyunithi ezintathu zinabantu omoya ezimbili (mawuthanda). Lokhu kungaba noma 4-step "okuzenzakalelayo" noma "Mechanics" izinyathelo 5.
TUC - amakhukhi, ama-crackers. Umkhiqizi, zinhlobo Ukwakheka kanye nokubuyekeza
Ngicabanga ukuthi ngingenza kanjani ugibe?
Ukuphenya kokwahlulela. luhlolo Forensic wezokwelapha ukushaywa